Sida loo hagaajiyo Cydia "waa lagu guuldareystay in la soo qaado" iyadoo la adeegsanayo iOS 9 | Wararka IPhone
Sida loo hagaajiyo Cydia "way ku fashilantay inay soo qaado" iyadoo la adeegsanayo macruufka 9
Isticmaalayaal badan ayaa la soo kulmay dhibaato yar ka dib markii Jeilbreaking Pangu ilaa iOS 9 aaladaha iPhone-ka laga keenay Mac OS. Marka ugu horreysa ee Cydia la furo oo xogta la arko iyadoo ku socota qoraal cad, qoraal iyo qeylodhaan ayaa u muuqda oo sheegaya "Waad ku guuleysan weyday"Kusocod koodhkan" http://apt.saurik.com/dists/ios/1240.10/main/binary-iphoneos-arm/Packages.bz2 "khalad sida muuqata soo noqnoqonaya. Ciladdan awgeed, Cydia ma awoodo inay rarto dhammaan meelaha keydka loo baahan yahay, iyo sidoo kale xirmooyinka, sidaas darteed gebi ahaanba waa wax aan macquul aheyn in lagu rakibo isbeddello cusub, sidaa darteed, Jailbreak wax adeeg ah gabi ahaanba ma lahan, waana sababta dhabta ah ee aan 'iPhone' aan kuugu caawinnay xali.
Sida loo xaliyo "Guuldaraystay in la soo qaado" gudaha Cydia
Xalku waa wax la yaab leh, sidaa darteed waxaan isku khiyaanaynaynaa nafteena. Waxyaabaha ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno oo dhan waa inaan barkinta ka joojino WiFi-ka una beddelno adeegsiga xogta moobiilka. Marka bye-bye WiFi, laakiin ha ka welwelin, isticmaalka xogta ayaa yaraan doona. Hadda waxaan aadi doonnaa qeybta "Ilaha" halkaasoo aan ku arki karno meelaha wax lagu keydsado oo aan gujineyno "Cusboonaysiinta" ama "Refresh" badhanka. Ka dib markii cusbooneysiintan la dhammeeyo, baakadaha si sax ah ayaa loo raraa oo waxaan dhihi karnaa dhibaatadan.
Ma garanayno sababta saxda ah ee Cydia ay si sax ah ugu shaqeyso xogta moobiilka oo ay ugu guuldareysato WiFi. Waxa cad waa tan iyo markii Pangu iyo lammaanaha kale ee Shiinaha u yimaadeen inay xukumaan Jailbreak, waa isku xigxig ka dib mid kale oo cayayaanka iyo khaladaadka ah, markaa shaqsiyan waa JAILBILAND waxa igu kalifaya igu farax yar mudo dheer. Kalsooni darrida kuma dhiirrigeliso inaan aad u isticmaalo.
Waxaan rajeyneynaa in khiyaanadan fudud ay kaa caawisay inaad ka soo kabato Cydia qaladkan guud ee loogu talagalay kuwa sameeya Jailbreak ka socda Mac OS X, waa wax iska fudud, waana taas sababta aanan ugu siin talaabo talaabo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, sanduuqa faallooyinka adiga ayaa adiga kuu ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo hagaajiyo Cydia "way ku fashilantay inay soo qaado" iyadoo la adeegsanayo macruufka 9
Taasi miyaanay ka dhicin daaqadaha ???
Sida loogu nadiifiyo dhammaan ogeysiisyada 3D Touch si loo caddeeyo ogeysiisyada
Codsiyada ugu horreeya ee tvOS waxay bilaabaan inay soo muuqdaan